ကိုယ်ရေးတဲ့ကိုယ့်အကြောင်း/written about me by me
မိသားစု စီးပွါးရေးဖြစ်တဲ့ ဓနုဖြူ ဒေါ်စောရီ မြန်မာစားသောက်ဆိုင် က အိသက် တို့မမွေးခင်ကတည်းက ရှိပြီးသားပါ၊ အဖိုးဦးမောင်ပုနဲ့အဖွားဒေါ်စောရီတို့ တည်ထောင်ခဲ့တာပါ .အမေကဒေါ်စောရီ ရဲ့ သားသမီးရှစ်ယောက်အနက်သမီးအလတ်ပါ
Danuphyu Daw Saw Yee Myanmar Restaurant was founded and has been running asafamily business long before I, Ei Thet was born. It was established by my grand parents, U Maung Pu and Daw Saw Yee. My mom is number fourth of 8 children of theirs.
အဖွားဒေါ်စောရီ( သေးသေးလေးနဲ့အရမ်းတော်ပြီး ထက်တဲ့သူ အဂါင်္သမီး)
Grandma Daw Saw Yee (tiny but exceptionally good Tuesday-born one)
အစားအသောက်တွေကြာ:ထဲ ကြီးပြင်းခဲ့တယ် လို့ဆိုချင်တာပါ၊ ငယ်ငယ်တည်း က အမေ
I am just trying to say that was how I was brought up with the food making background.
လုပ်သူရဲ့အိမ်ရှင်မ ပီသမှု၊ မီးဖိုချောင် နိုင်နင်းမှု၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အဖေ (အဖိုးကအဖေကိုကောင်းကောင်းစနစ်တကျသင်ပေးခဲ့တာပါ၊ သင်ဆို စားဖိုဆောင်မှာ ကြမ်းတိုက်တာကစခဲ့ရတာပါတဲ့၊ အလုပ်သမား နေရာနေဖူးမှ အလုပ်ရှင်ကောင်းတယောက်လို အုပ်ချုပ်တတ်ပါမယ်တဲ့( ရှေးလူကြီးများ short cut မရှိတာပြောပါတယ်)) နဲ့အတူ ဆိုင်စားဖိုချောင်မှာ ဝင်ပြီးတက်ညီလက်ညီ ချက်ပြုတ်တတ်တာတွေ၊ သားသမီး တွေရဲ့ကျောင်းထမင်းချိုင့် ကိုအသေးစိတ်စီစဉ်တာတွေ၊( အထူးသဖြင့် ဟင်းချည်းများတဲ့ အိသက် အတွတ် အမေအတော်ကို ခေါင်းစားခဲ့မှာပါ ) အမေက အသား၊ငါး လတ်ဆတ်မှုရွေးရာမှာလဲအလွန် တော်ပါတယ်၊သားသမီး လေးယောက် ကိုထမင်းတခါစားတိုင်း အကြိုက်တမျိုးစီ မက စီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကိုလဲ ကိုယ်ကိုတိုင်ခလေး ၂ ယောက်အမေ
Since young, my mum’s been enjoying her pure talents of organizational skills, attention to details, beingagood housewife consists of managing the kitchen, taking care of her kids lunch-boxes according to individual needs for instanceafussy one like myself, would have been quiteaheadache but also cooking along side with my dad who was trained Very systematically by my grandpa, argued that you need to be in every single departments from scrubbing the floor to man management in order to becomeagood and successful leader. I kind of realised the fact that there is no short-cut in how to get rich and success. She is also good at picking up the right and freshest meat, fish and vegetable. I now fully appreciate as well as takeahuge pride of my mom as I myself becomeamother of two with regards to the reality of how could she managed every single meals that we had had been catered for, for our own little divert delights.
အိမ်ရှင်မဖြစ်လာမှ အမေကိုတော်တော် အံ့ဩ ချီးကျူး ဂုဏ်ယူမိပါတယ်၊ဒီမှာက ဟင်းတခွက်ဖြစ်ဖို့ကိုတော်တော်ခက်တယ်လေနော့၊ ဒါတောင်ဒီမှာ ready made တွေရှိလို့ တနေ့တနေ့ ဟင်းကို အရည်သောက်၊ အသားဟင်း၊ အရံဟင်း သုံးမျိုးဖြစ်အောင်အိမ်မှာ စီစဉ်နိုင်တာ၊
တသက်လုံးအမေ အချက်အပြုတ်တွေစားခဲ့ပြီး ဒီလို နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ စနေခါစက အတော်ကိုဒုက္ခရောက်ရတယ်၊ အထူးသဖြင့် အစားအသောက် ပေါ့လေ၊ အဲဒီ အချိန်တုံးက မောင်လေးက လန်ဒန်မှာ ရှိနေတော့ သူကဆိုင်မှာ ဒီမလာခင် အဖေက ဟင်းချက်တတ်အောင်သင်ထားတော့ သူက ဟင်းချက် ကိုယ်ကသူ ချက်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးရ ဆေးကြောပေးရနဲ့ သူ့ရဲ့ တောက်တိုမယ်ရ လေးပေါ့၊
ဒါပေမဲ့ သူပဲ ဟင်းချက်တတ်အောင် ပံ့ပိုးပေးခဲ့တာဆိုပါတော့၊ အဲဒီလိုနဲ့ဟင်းလေးတွေ စချက်တတ်လာတယ်ပေါ့၊
သားကြီး ခန့်ညားထွဋ် ကိုမွေးခါနီးအမေ လန်ဒန် လာတော့ တော်တော် အံ့ဩသွားတယ်တဲ့
“ပုဇွန်ချဉ်တောင် ကိုယ်ဘာသာချဉ်စားတတ်နေပြီကို ” တဲ့ ၊
အမေက အဲဒီကစပြီ ဟင်းချက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စနစ်တကျလေးပြောပြ သင်ပြပါတော့တယ်၊ ခုထိလဲ မသိတာဆိုမေးနေရတုံးပါ။
It is not so easy to cookamain dish in UK (Myanmar Curry contains some ingredients that are not easily found in most of the food stores) as we all know. Luckily, the ready made stuffs (ingredients wise) sent from Burma helps to get soup, meat curry and side dishes on daily basis.
Soon after I arrived to London with the stomach which used to partake of my mum various delicious meal, I struggled. Fortunately, my younger brother was in London already knows how to cook as he’s been trained before he came over here by my Dad. So, I was downgraded to prepare for him to cook and tidied up the mess after his masterpiece. Since then, I started cookingabit andabit more. So dare I say to conclude that without his support, I wouldn’t beagood cook as I suppose I am today.
My mum was gobsmacked to find out that I can even make the Burmese traditional pickled prawn when she came to London for my maternity period and my first born son, Khant Nyar Htut. As impressed with my work, she then taught me orderly when it comes to food and answers all my questions without fail until now.
ချက်သမျှဟင်းတိုင်းကိုမညီးမညူ စားရင်းပိုတိုးတက်အောင်အကြံပေးသော ခင်ပွန်းသည်ကိုထက်မြက်ဦးကိုလဲအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ရန်ကုန် အလွမ်းပြေ အစားအစာ လေးများကို မိသားစုလုပ်စားဖြစ်တိုင်း နိုင်ငံခြား ရောက် မြန်မာသူငယ်ချင်း များကို လုပ်နည်း လွယ်လွယ်လေးများ ပြောပြပေးချင်လို့ website ကိုရေးဖြစ်တာပါ.အားလုံးပဲပြုံးပျော်နိုင်ကြပါစေ..
My husband, Ko Htet Myet Oo is to be thankful to his advice, contribution and more importantly to his never tired attitude of relishing my cooks are all very well connected with gaining momentum of my hobby.
This website is done/ the articles in this website are written with the intention of sharing the simple and easy to cook recipes to all of my friends abroad whenever we cook to the remembrance of my mum’s specials . May you all be peaceful and happy…
129 comments on “ကိုယ်ရေးတဲ့ကိုယ့်အကြောင်း/written about me by me”
20/02/2012 @ 9:05 pm
အရမ်းကို တော်တာပဲ.. ဟင်းတွေအားလုံး အရမ်းကောင်းမှာ သေချာတယ်..အကုန်လုံးစားချင်တယ်.. နောက်မှပဲ မဆုအချိန်ရလျင် စမ်းပြီးချက်အုန်းမယ်..
20/02/2012 @ 11:40 pm
မ အရမ်းကျေးဇူးနော် ။ စမ်းချက်စရာမလိုအောင်တော်ပြီသား မဆုက.
21/02/2012 @ 12:26 am
မဆုလက်ရာတွေကျကုန်ပြီ… ဖြစ်သလိုချက်နေရတာ အတော်ကြာနေပြီ…:(
21/02/2012 @ 12:47 am
ကလေး လေးငယ်သေးလို့ပါ ၊ မဆုကတော်ပြီးသား ပြန်ချက်ရင် ပြန်ကောင်းမှာသေချာတယ်၊ သမီး ကလဲချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ မဆုရယ် 🙂
ei thet yay.., i hope so…:) thanksalot…
21/02/2012 @ 1:21 am
Kay Khine Win
21/02/2012 @ 5:17 am
21/02/2012 @ 3:27 pm
ကောင်းတာပေါ့ ညီမလေးရယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။ 🙂
24/02/2012 @ 5:00 am
24/02/2012 @ 10:54 am
25/02/2012 @ 6:09 pm
မအိသက် ဟင်းချက်ဝက်ဆိုက်လေးကို အတွက် အထူးကျေးဇူးပါ… အိမ်မှာ ကြေးအိုးလုပ်စားချင်နေတာကြာပြီ၊ ခုမှ မအိသက်ဆီက နည်းရတော့တယ်.. အထူးရှဲရှဲ
25/02/2012 @ 7:06 pm
မကလဲ ကျေးဇူး ပါပဲနော်။ website လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ပါ။
26/02/2012 @ 5:52 am
five spice powder ဆိုတာ ဘာလဲ
10/03/2012 @ 1:37 pm
It’saChinese Marsala par.
26/02/2012 @ 3:21 pm
26/02/2012 @ 7:30 pm
thank u for watching naw. Ma San San
26/02/2012 @ 9:33 pm
27/02/2012 @ 3:40 am
oh my dear . now only I know that you are grand daughter of Danuphyu Daw Saw Yee . I like your link and you are very capable woman indeed 🙂 thanks for your sharing sis . It is very helpful . Let me share on my FB wall
28/02/2012 @ 9:21 pm
ဟင်းတွေအခုထိုင်ပြီး ကြည့်နေတာ.. ကြည့်နေရင်း ဗိုက်ကတဂွီဂွီမြည်နေတယ်.. အမလေးတော် ဒုတ်ခပါပဲ..:( အားလုံးစားချင်တယ်…
28/02/2012 @ 11:03 pm
မဆုရေ နီးနီးလေးဆိုရင်တကယ်ကျွေးချင်ပါတယ် 🙂
29/02/2012 @ 2:01 am
thanks ei thet yay.., will eat when we visit to London…:)
29/02/2012 @ 2:22 pm
of course, ma hsu. cant wait to meet ur little angel.
Zin Wint Maw
04/03/2012 @ 10:22 am
Thank u millions for recipes of Danuphyu Daw Saw Yi…. I was crashed on DAw Saw Yi’s rest: while i was in Yangon…the ONE i like most as well…. all my foods going funny ways live in London after3years… Luckly i see ur web in f/b now i can get back my traditional foods in excellent Daw Saw Ye’s style. Cheers!!!
04/03/2012 @ 10:55 am
Oh! Thanksalot for watching my website and glad u like that. Thanks for being our fan. Zin yay. Come visit to my Website whenever u r free.
06/03/2012 @ 5:05 am
06/03/2012 @ 9:45 am
ရပါတယ် မ 🙂
U Aung Myin Oo
06/03/2012 @ 8:45 am
It’s very nice to read your article.You’re wonderful girl indeed.You’ve the chance to spread the real Burmese food to all Myanmar living in England and if possible you should openalittle shop and fulfill your enthusiasm for hungry Myanmar people there who wish to eat Danuphyu Daw Saw Yee’s Myanmar traditional food foralong time.I do hope you’re the only one who can expand the delicious Myanmar food in other countries.You should know nobody wish to cook by themselves rather like to eat inagood restaurant.Do try it,we’ll provide what you need,right?
06/03/2012 @ 10:32 pm
I felt so touched and your encouragement is the best vitamin pill for me to carry on doing what I enjoy doing. I really really mean it Dad. I am so glad that I haveagreat parents like you although you are my parents-in-law but you are my Dad as you will always cheer me up of my good works which may not as great but it is definitely get me going. We love you so much. We love you Dad, we love you Mum. Thanks you very much for your continuous supports.
11/03/2012 @ 7:29 pm
ကြည့်ရတာ ဖတ်ရတာ ကြိုက်လိုက်တာ ..
ဟင်းလေးတွေလည်းကောင်း .. website လေးကလည်း လှ ..
11/03/2012 @ 7:45 pm
မမို ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့အရမ်းပျော်တာပဲ။ ကျေးဇူးပါမရယ်။ အိသက် က Burglish ကနေရေးရတာ။ လက်ကွက်နဲ့မ နှိပ်တတ်လို့ ၊ Post တခါတခါတင်ရင်အရမ်းကြာတာ။ 🙂
11/03/2012 @ 7:43 pm
Thank you so much for this site. I am so proud of you. It’s amazing that you could find time to write, cook, work and so on. Suchatalented young lady. Keep posting 🙂
11/03/2012 @ 7:48 pm
I did full time before but I just reduced my hours to stay at home with kids and cooking. That is why I hv time. thanks for ur sweet comment.
11/03/2012 @ 10:35 pm
မမအိသက် ရဲ့ food blog လေးရော bio လေးရော.. အရမ်းကို ကြည့်လို့ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ အိမ်မှာချက်သမျှဟင်းတွေထဲမှာ အစ်မဆီက idea တွေ အများကြီးယူရပါတယ်။ ခုလို ဟင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်တဲ့ ဇနီးကောင်း မိခင်ကောင်းရလို့ အစ်မမိသားစု သိပ်ကိုကံကောင်းပါတယ်။ 🙂
12/03/2012 @ 8:03 pm
ဟေမာလေး ရေ မမိသားစု ကလဲ ညီမလေးရဲ့Sweet comment လေးအတွက်ကျေးဇူးပါနော်။ ဟေမာ လေးဆီကသင်စရာလေးတွေလဲအများကြီးရှိပါတယ်။ နောက်လဲ blog ကို လာလည်ပါညီမလေးရေ 🙂
12/03/2012 @ 1:45 am
Thank you naw:)
16/03/2012 @ 8:28 am
Ma Ma yae,
Thank you so much for your website and receipes.
You are awesome!!I love your website.
Ma Ma if you know how to cook Myae-Ohe-Myee-Shae and Toe-Phue-Nwe, could you please share me on your website? Thank you so much , Ma Ma.
16/03/2012 @ 9:12 am
thank u for watching my website. if u like it pls pls share with ur friends naw. i already post မြေအိုးမြီးရှည် https://htetfamily.com/2012/02/07/မြေအိုးမြီးရှည် and will do toe hu nway on sunday for u. naw thanks.
21/03/2012 @ 8:22 pm
ဟားဟားအိသက်ရေဒီဆိုဒ်ကိုဒီနေ့မှဖတ်ရတယ်သိလားဓနုဖြူဒေါ်စောရီမြေးမလေးဆိုတော့ဟိုက်အန်ကယ်ဦးလှအောင်နဲ့ဘာတော်ပါလမ့်ဆိုပြီးရှာတော့မှအန်ကယ်နဲ့အန်တီတို့ရဲ့သမီးအရင်းကြီးဖြစ်နေတာကိုဟီးဟီးကမ်ဘာကြီးကကျဉ်းလိုက်တာနော်အိသက်နဲ့မတွေ့ဖူးပေမဲ့ဒို့နံမည်ကမတိုးပါအန်ကယ့်ကိုပြောပြလိုက်နော်ဦးသွင်လှသမီးအမေရိကားရောက်နေတဲ့တစ်ယောက်အိသက်ဘလော့ဖတ်ရလို့အရမ်းပျော်နေတယ်လို့မြန်မာအစာတွေငတ်နေတာကြာပြီကွယ်အိသက်ကိုကြေးဇူးတင်တယ်သိလားမုန့်လုပ်နည်းတွေအကုန်ပြောထားလို့လေအန်ကယ့်သမီးမို့တမင်ဝင်နှုတ်ဆက်လိုက်တာပါနော်ပြီးတော့အန်တီတို့အန်ကယ်တို့လိုဘဲအိသက်ကခင်ဖို့ချစ်ဘို့ကောင်းတယ်နော်မတိုးလဲခလေး ၂ ယောက်နဲ့မီးဖိုချောင်ထဲရောင်လယ်လယ်နဲ့မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းနေရတဲ့အိမ်ရှင်မလေးပါဘဲကွယ်ချက်နည်းတွေလဲကော်ပီလုပ်သွားတယ်နော်ကျေးဇူးပါ
21/03/2012 @ 10:39 pm
ဟုတ်လားမရေ မနဲ့မသိပေမဲ့ အဲလိုမိဘတွေနဲ့ရင်းနှီးတယ်ဆိုလို့ ကိုယ့် ဆွေမျိုးတွေပြန်တွေ့ရသလိုအရမ်းပျော်တာပဲ ခဏခဏလာလည်ပါနော် blog ကို။ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ကြော်ငြာပေးနော်။ ဖေကြီးနဲ့မနက်ဖြန် Vzo မှာတွေ့ရင်ပြောလိုက်မယ်နော် 🙂
22/03/2012 @ 2:29 am
Thank you so mcuh , Ma Ma Ei Thet.
I love cooking too.
22/03/2012 @ 8:30 pm
keep cooking Nyi ma lay. you will be super in cooking one day. 🙂
Kaung Myat Ohn Naing Aye Aye Maw(That's my new name......)
23/03/2012 @ 4:05 pm
That’s my sis…….yeah right….go go go go go…Aja Aja Fighting………..I’m so happy to seeablog within my family….as i haven’t seen any….cuz the connection and preventions here in myanmar sucks……Anyway,Sis U’re the best…..U did really pretty welll……………..
27/03/2012 @ 8:26 pm
အိသက်ရေ.. မဆုခုတလော အရမ်းအလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ ခုမှပဲ အိသက်ရဲ့ blog ကိုပြန်လာလည်ဖြစ်တယ်……အားလုံးစားချင်တယ်…….အိမ်နီးရင် ကောင်းမှာပဲနော်……အိသက်ရေ မြန်မာပြည်က ရွှေခိုင် ရွှေလီ အကင်ဆိုင်တွေကလိုမျိုးအရသာရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဟင်? ဒီက အကင်တွေကို ကြိုက်ဘူး..သိရင် ပြောပြပါအုန်း… ကျေးဇူးရှယ်…:)
28/03/2012 @ 12:34 am
i will do the bbq very soon Ma Hsu yay, naw . 🙂
28/03/2012 @ 12:54 pm
okie…thank you so much ei thet lay yay..:)
28/03/2012 @ 1:32 pm
Thanks for this blog Ei Thet. I just found out and love to try your recipe.
28/03/2012 @ 6:56 pm
Welcome Yawai. 🙂
04/04/2012 @ 8:42 am
Hi Nyi Ma lay
I discovered your web and blog two days ago on FB and can’t stop visiting onceaday everyday since then. It’s so fun to read and your recipes look simple and easy to follow. You are not onlyagreat cook but alsoatalented writer.
Actually, the names of your grandparents have been familiar to me since 20 years plus. I ranaclinic at South Okkalapa in 90s and my landlady was related to Danuphu Daw Saw Yee. (Daw San Tin and U Thaung Shwe) From them, I heard the names many times. We were inagood friendship until I came to the UK and now, I’m not in touch with them. Kalaya and Mie Mie, we wrote to each other in the first few years though. They are still in my good memories.
Anyway, I’ll keep reading your blog. Happy Bday and anniversary!
04/04/2012 @ 10:29 am
yes they r my family too. ma ma kalayar has married to my adopted bro.(my oldest aunty’s adopted son). he is real bro to us. she is now my cousin and also sis in law. anyway, nice to meet uama . 🙂
10/04/2012 @ 12:11 pm
မအိသက်ရဲ့ ဟင်းချက်နည်းတွေအားလုံးကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်..အရမ်းလည်းချီးကျူးပါတယ်အစ်မရေ.. ကျွန်မလည်း ဟင်းချက်ရတာကိုဝါသနာပါလို့ အစ်မ website ထဲကို အမြဲဝင်အားပေးဖြစ်ပါတယ်..ဟင်းလေးတွေလည်း လိုက်ချက်စားဖြစ်ပါတယ်.. ဟင်းအမယ်အားလုံး အတွက်ကျေးဇူးနော်တစ်မ..အစ်မနဲ့ လေ facebook မှာ friend ဖြစ်ချင်တာ အသိမိတ်ဆွေမရှိလို့add မရလို့ လေ funky food ကိုပဲ like လုပ်ထားရတယ်..အစ်မတို့ မိသားစုပုံလေးတွေကြည့်ပီး သဘောကျလို့ ပါ nice family…..အစ်မတို့ မိသားစု ခုလိုပဲ အမြဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ပါစေ…
10/04/2012 @ 7:15 pm
funky food ကို like လုပ်ပေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်နေပါပြီ။ အမလဲ ညီမ email address နဲ့ friend လုပ်မလို့ရှာတာမတွေ့ဘူး .ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေနော် 🙂
18/04/2012 @ 2:51 am
လာလည်သွားပါတယ် မအိသက်… ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ… နောက်လဲ ဝင်ဖြစ်နေဦးမယ့် website လေးပါ…
thank you par 🙂
23/04/2012 @ 7:33 am
အမရေ … အမရဲ့ ဟင်းချက်နည်းတွေ အများကြီးကို ဖတ်ပြီးသွားပြီ။ အရမ်းလည်း သဘောကြတယ် .. အမ နည်းလေးတွေကို Share ပေးလို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …… ဟင်းတွေအားလုံးကို သဘောကြတယ် … အမက ဟင်းချက်တာေ၇ာ .. ဟင်းတွေကို စားချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်တာရောမှာ အရမ်းမိုက်တယ် …….. အမကို အပြင်မှာ မမြင်ဖူးပေမယ့် အိမ်ရှင်မကောင်းတယောက် အဖြစ် လေးစားအားကျမိပါတယ် … နောက်လည်း အမ Website ထဲကို ၀င်ဝင်လည်အုံးမယ်
23/04/2012 @ 11:02 pm
25/04/2012 @ 4:48 am
အမရေ အမဘလော့ ပေါ်ကဟင်းချက်နည်းလေးတွေရလို့အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ပုဇွန်ငါးဆုပ်လုံး ဟင်းပါ။
အဖွားရှိတုံးကဟင်း ကောင်းကောင်းတွေချက်တတ်တော့ အဲ့ဟင်းလေး ကိုလည်းခဏခဏ စားရပါတယ်။ အဲ့တုံး ကတော့လွယ်လွယ် ရနေတော့တန်ဘိုးမထားတတ်ခဲ့ဘူး။
ခုမစားရတာကြာတော့ မှ ငါ recipe မသိရလေခြင်း ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ အမ အဲ့ post လေးကိုတွေ့တော့ပျော်သွားတယ်။ လွယ်လည်း အရမ်းလွယ်တာဘဲ။ အမျိုးသားကိုလည်း ဟင်းကောင်းကောင်းလေးတွေ ချက် ကျွေးချင်နေတာခုဆို အမဘလော့ကနေ recipes တွေယူပြီး ချက်လို့ရပြီ။ ညီမလည်းအမ လိုဘဲ။ ကနေမြန်မာစာရိုက်ရတာ။ ဒါစာရေးတာတောင်အတော်ကြာတယ်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ပြောပါရစေ။
25/04/2012 @ 4:50 am
Burglish ကနေမြန်မာစာရိုက်ရတာ။ 🙂
25/04/2012 @ 2:36 pm
29/04/2012 @ 11:55 am
Thank you very very much for sharing your beautiful recepies with us… it is so lovely.. especially the တိုဟူးနွေး
And if can
မ ရေ စမူဆာ သုတ် နဲ.စားတဲ, ပဲရည်.နည်းနဲ.မဆလာစပ်ပုံလေးပါတင်ပေးပါ
29/04/2012 @ 3:58 pm
yesterday , i made them for my best friends family . i will post it tonight naw
02/05/2012 @ 1:15 pm
ွှွှအိသက်ရေ အရမ်းတော်တာဘဲ..အားကျလိုက်တာ…ဒီ site လေးကို အရမ်းသဘောကျတယ်..အားပေးနေမယ်နော်..ရန်ကုန်က အိသက်တို့ ဆိုင်က အမ တို့ ဆိုင်က ငရုပ်သီးမုန့် တွေအရင်တုန်းက ယူတယ်..အခုတော့ မသိဘူး အိသက်ရေ..အမ လည်း london မှာပါဘဲ..အိသက်ဆီက recepies လေးတွေရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..ညီမ ရေ..
02/05/2012 @ 5:58 pm
what is ur brand or shop or parents name ma yay . then i will ask my mum. we can see each other if u r in london . here is my no 07515405576 🙂
04/05/2012 @ 11:42 am
အမတို့ brand name က ဒေါ်ထွေး ငရုပ်သီးမှုန့် ပါ ..shop က သိမ်ကြီးဈေး မှာပါ ..အိသက်တို့ လို ဘဲ အမ တို့ အဖွားလက်ထက်ထဲ လုပ်ခဲ့ တဲ့ မိသားစု လုပ်ငန်းလေးပါ..အိသက် နဲ့ လည်းခင်ချင်ပါတယ်..အမ ဖုန်းက 07803147176 ပါ..
06/05/2012 @ 6:03 pm
မထင်မှတ်ပဲ ဒီ Side ကို တွေ့ ပြီး မအိသက်ရဲ့ ဟင်းချက်နည်းလေးတွေကို ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးပါ… ကျမလို ဟင်းသေချာမချက်တတ်သူအတွက် မအိသက်တို့ လို ဟင်းချက်တော်တဲ့သူတွေဆီက အခုလို Website လေးကတဆင့် ပြန်သင်ပြပေးတဲ့အတွက် မအိသက်တို့က မြင်ဆရာတွေပါ.. .. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..
06/05/2012 @ 10:31 pm
Thanksalot for interesting 🙂
19/05/2012 @ 5:46 am
ရန်ကုန်မှာ နေတုန်းက ဓနုဖြူဒေါ်စောရီမှာ အားပေးနေကြပါ။ 🙂
19/05/2012 @ 3:30 pm
cho cho chit
29/05/2012 @ 2:35 am
မ ရေ .. တင်ထားတဲ့ side ကို အထူးအဆန်းလေးတွေ ဝင်ကြည့် အတုခိုးရတယ်..တော်လိုက်တဲ့ မမ ရဝ်… ချို တို့အထုယူရလောက်တဲ့ အချက်အပြုပ်တော်တဲ့ မမ တစ်ယောက်ပါဘဲ…
29/05/2012 @ 4:40 pm
ချိုရေ နံမည်နဲ့လိုက်အောင်စကားပြောလဲချိုပါပေတယ် 🙂
02/06/2012 @ 1:49 pm
အိမ်လည်လာသွားပါတယ်..အသစ်တင်တိုင်းလည်းဖတ်ချင်လို့ Mail Suscribe လုပ်သွားတယ်..
ရန်ကုန်မှာတုန်းက အဖွားဓနုဖြူဒေါ်စောရီရဲ့ဆိုင်မှာအမြဲတမ်းအားပေးပြီး ဟင်းတိုင်းကိုအရမ်းကြိုက်တာ..
03/06/2012 @ 10:25 am
အားပေးတာကိုလဲအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လာလည်တာကိုလဲအရမ်းပျော်တယ်နော် ကျေးဇူးမရေ 🙂
Cho Cho Thein
09/06/2012 @ 10:47 am
အမ ရေ အရမ်း ကျေးဇူးတင် ပါတယ် …ချို က ဟင်း ကိုကောင်းကောင်း မချက်ဖြစ်တာလေ …ခု အမ
ထဲ က ချက်နည်း တွေကြည့် ပြီး အဆင်ပြေ နေတာ … အမ ကို ကျေးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ်……
10/06/2012 @ 6:41 pm
cho yay , i did not know how to cook before too nyi ma lay. 🙂
Wut Yee Lwin
27/06/2012 @ 9:33 am
အိသက် ငါအရမ်းဗိုက်ဆာသွားပီ။ စိတ်ဆိုးသွားပီ :P။ ငါကတော့ ဟင်းမပြောနဲ့ မီးဖိုနားထောင်မကပ်မိတော့တာ တော်တော်ကြာနေပြီ။ နင့်ပုံတွေမြင်မှ ဟင်းပြန်ချက်ချင်သွားပြီ။ အရမ်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ ငါ့သူငယ်ချင်းလေးကို အံသြသင့် တာ ပြောမကုန်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။ လသာ၂တုန်းက အိမ်သက်နဲ့များ အံ့ရောအံ့ရောပဲ။ ဟီးဟီး နင်စာရေးတိုင်း ၂၉လမ်းနဲ့ ပန်းဘဲတန်းပါတော့ ငါတောင်အိမ်ကိုလွမ်းသွားပြီ။ နင်နဲ့အပြိုင်ဝေမာလည်း ဟင်းချက်တာကျွမ်းပါ့ :P. subscription ပါယူထားလိုက်တယ်။ 😛
27/06/2012 @ 1:56 pm
အေးဟယ် ယောက်ျားကိုချစ်တော့လဲချက်ရတာပဲပေါ့၊နင်အပျင်းထူတာတွေ ကြွားမနေပါနဲ့ဟာ 😛
12/08/2012 @ 10:03 am
I really thank you for all posts.
Very good for us.
03/09/2012 @ 11:47 pm
hi,i worked together with ur uncle ko tin tun in japan long2 ago.how about ur uncle?no see longtime,sometimes remember him and his nephew kyaw swar my friend i regular customer in ur grandma,S RESTAURANT.thanks alot all posts.
04/09/2012 @ 12:23 am
U Tin Tun is like my own daddy.He is in good health in Yangon. Ko Kyi Kyaw Zwer passed away long time ago. Thanksalot and nice to meet you.
04/09/2012 @ 10:33 pm
Thanks for ur reply,so sorry about ko kyaw swar.ur uncle,friends ko nyunt aung,ko kyaw moe,ko myint swe all good health in japan many friends went back myanmar some moved to America.see u bye2.
05/09/2012 @ 12:55 pm
i will let him know 🙂
13/09/2012 @ 11:44 am
Nice to read your blogs, which I can read in Burmese (with zawgyi font ),but can’t write
Advise me how to write in Burmese? Any softwares? Also I am interested to write in Burmese blog. Don’t know where to start
13/09/2012 @ 3:44 pm
use that one http://burglish.my-mm.org/latest/trunk/web/testarea.htm
14/09/2012 @ 8:00 am
Thank. I got your burlish test website But .I got nowhere from this link which is too old.Could you help? Do you have any Face book address? I am from UK
14/09/2012 @ 6:54 pm
http://facebook.com/ethet1 is my facebook 🙂 my no is 07515405576
15/09/2012 @ 12:54 pm
မြန်မာပြည်ကထွက်လာတုန်းကအမေ့ဆီကဘာမှမသင်ခဲ့တာ ခုမှပဲ မအိသက်ရဲ့ဟင်းချက်နည်းတွေကိုသင်ယူနေရတယ်။ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ အစ်မတို့မိသားစု ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ။
16/09/2012 @ 11:29 am
အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ 🙂
15/09/2012 @ 5:19 pm
27/10/2012 @ 4:03 am
ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုတစ်ခုအကြောင်းဖတ်ရလို့ အားလဲကျ ၀မ်းလဲသာမိပါတယ်ဗျာ။ (ဒီတစ်ခါတော့ ဗျာဆိုတာလေးထည့်ရေးမှာ….မဟုတ်ရင် ပြားမှားစိုးလို့ 😛 )။ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုလေးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။
27/10/2012 @ 1:15 pm
a hae , sorry par hae . kyayy zuu par mg layy yae 🙂
13/11/2012 @ 7:22 am
မအိသက်ရေ အကိုတစ်နေ့ ကဆိုဒ်တစ်ခုမှာတွေ့ လို့ညီမရဲ့ ဆိုဒ်ကလေးကို အကိုတို့ သတင်းစာဝေမျှတဲ့ ဘလောက်လေးမှာ ဆင့် ပွားထားပါတယ်…ဓနုဖြူဒေါ်စောရီ ထ္မင်းဆိုင်ကို အကိုတို့ လွန်ခဲ့သော အနှစ်၃၀လောက်တည်းက ရန်ကုန်မဂိုလမ်းအထက်ဆိုင် ရွှေထူးမိုးပျံခေါက်ဆွဲ ညီမတို့ သိမှာပါ ဘဲသားပေါင်းနဲ့ ထ္မင်းစားယင် ၆ကျပ်ခေတ်တည်းက အားပေးခဲ့ တာပါ အခုလည်း မလေးရှားရောက်နေပေမဲ့မြန်မာပြည်ကို ခနခနပြန်တိုင်း ၊ဝင်စားနေကြပါ၊လမ်းမတော်ညောင်ပင်လေးဈေးကြီး ဦးသန့်မသေခင်တည်းက၊ဦးစံထ္မင်းဆိုင်လည်း ကြက်အသဲမြစ်နဲ့စားမှ၂ကျပ်ခွဲခေတ်တည်းကပေါ့ ပြောယင်အစုံပါပဲ။လက်ယာတူတယ်၊မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာ့ထ္မင်းဟင်းလက်ယာနံပါတ်၁ဟုရာသက်ပန် သမိုင်းဝင် ထ္မင်းဆိုင်လို့ အားယင်လည်း စာပေရသလေးတစ်ခုဖြစ်ရေးသားပါအုန်းမယ် အကိုရဲ့ သေးငယ်လှသောဖရီးဘလောက်စပေါ့ လင့် ခ်နာမည်လေးမှာ http://mixgawli.blogspot.com ဖြစ်ပါတယ် ဘလောက်မှာ ညီမငယ်တို့ လင့် ခ်ချိတ်ထားပါတယ်၊ထပ်ဆင် ပြီး ဒီကွန့် မက်ကိုဖတ်မိသူတိုင်း မသိသူကျော်သွား သိသူလုပ်စားလို့ ရပါတယ်-ဒီနည်းပညာနဲ့ မိမိတစ်နိုင်တစ်ပိုင် မိသားစုဝမ်းရေး စီးပွားဖြစ်လုပ်ကိုင်စားနိုင်ကြောင်း ထပ်လောင်း၍မြန်မာပြည်မှ ပြည်သူများကျော်ငြာပေးပါတယ်၊မဝတ်ရည်ရဲ့ နည်းလည်း စီးပွားဖြစ်လုပ်စားလို့ ရပါတယ်၊သူ့ နည်းပညာနဲ့ မလေးရှားမှာ လုပ်စားနေတဲ့မြန်မာထ္မင်းဆိုင်တွေလည်းတွေ့ရှိထားကြောင်း ဝမ်းသာစကားတစ်ခါတည်းမှာလိုက်ပါတယ်…ကိုဂေါ်လီအွန်လိုင်းမှ ကွန်ပျုတာနည်းပညာနှင့် သတင်းစာဝေမျှခြင်း
13/11/2012 @ 8:56 pm
kyayy zuu tin par taeako yay 🙂
18/11/2012 @ 2:28 pm
ရတနာ ဟင်းချက်ရတာ ဝါသနာမပါဘူး။ ဒါမယ့် မ site ထဲဝင်လာပြီးတော့မှ ချက်ချင်သွားတာ…. အမက စိတ်ရှည်တယ်နော်။ အားလုံးစမ်းချက်ကြည့်ချင်တယ်။ share ပေးတာကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။
ပြီးတော့ facebook ကိုဝင်ကြည့်ဖြစ်မှ လသာ၂ ကလို့ သိရတော့ ပျော်သွားတာ။ ရတနာ လည်း လသာ၂ ကပါ။ မ တို့ထက်တော့ ငယ်တာပေါ့။ မ ဆီက reply မျှော်နေတယ်နော်။
ဒီထက် ပို၍ တိုးလို့ ဆပွား အောင်မြင်ပါစေနော်။ ခဏခဏ လာလည်မယ် 🙂
18/11/2012 @ 10:47 pm
ညီမလေးရေ မကြောင့်ဟင်းချက်ချင်သွားတယ်ဆိုလိုဝမ်းသာပါတယ် လသာ ၂ကတော့တော်တော်စည်းလုံးတယ်နော် တကျောင်းတည်းမှန်းသိရင် ပိုချစ်သွားရော:)
19/11/2012 @ 3:05 pm
27/06/2013 @ 11:15 am
Thanks for this website 🙂
26/08/2013 @ 6:23 am
ိwebsite ထဲဝင်ကြည့်ပြီး မုန့်တွေ စမ်းလုပ်ကြည့်တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပီစာလုပ်နည်းလဲ တင်ပေးပါအုံး
20/09/2013 @ 2:58 pm
အတွေ့နောက်ကျတယ် ဆိုနိုင်ပေမဲ့လည်း ခုလိုတွေ့ရတာကိုပဲ ၀မ်းသာမိပါတယ် … ဟင်းချက်ရတာ ၀ါသနာပါတာမို့ .. မမ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို အမှတ်မထင်ရောက်ခဲ့ ရပါပြီ.. ဒါပေမဲ့ သဘောကျနှစ်သက်မိပါတယ် … ကိုယ်မသိတာလေးတွေ သိရလို့လေ…ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာ မဟုတ်တဲ့ သူဆိုတော့ ဟင်းစားဝယ်ရတာ အရမ်းကသီပါတယ် … မမလက်ရာလေးတွေ အရမ်းသဘောကျတယ် … နောင်လည်းအားပေးမယ်နော် …
21/09/2013 @ 10:08 am
03/12/2013 @ 4:02 am
hello! can you tell me what is the name of the Burmese roadside snack shown at the top of your blog ? It is the one on the black plate made of coconut and beans. Thanks!
04/12/2013 @ 1:28 am
It is called Mont Pyar Tha Lat made with rice flour. rice pancake with beans or peas with spring onion
28/12/2013 @ 1:39 pm
အမ rasa ထမင်းကြော် နှင့် nasi ထမင်းကြော် ကွာခြားမှုလေးကိုသိချင်ပါတယ်ဗျ…….. ကျေးဇူးတင်ပါဗျ။
08/02/2014 @ 4:27 am
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..ကိုယ်စားချင်တာလေးကို လာလာကြည့်ပြီး လုပ်လုပ်စားနေလို့ မအိ က ကျမ ရဲ့ သင်ဆရာ တယောက်ပါ..။
09/02/2014 @ 10:35 pm
လာလာ ကြည့်တယ်ဆိုလို့ကျေးဇူးပါနော် 🙂
Sandar Moe Tun
15/03/2014 @ 4:04 am
အမကတော့အိသက်ရဲ့ဖာလူဒါ ကူဖီလ်းကိုလုပ် စားကြည့်တယ်။ကလေးတွေအရမ်းကြိုက်လို့အိသက် ကိုကျေးဇူးတင်တယ်
thanks for let me know nawama 🙂 ❤
Zin Kyi Win
21/03/2014 @ 6:45 pm
စာအုပ်ထုတ်ပါညိမရေ … အားပေးဖို့စောင့်နေမယ်
စာအုပ်ကို အယ်ဒီတာက ထွက်ခိုင်းနေတာ ၁နှစ်နီးပါးရှိပြီ မအားတာနဲ့ မလုပ်နိုင်တာ အခု ထွက်ခါနီးပါပြီ thanksama 🙂
12/04/2014 @ 5:05 pm
မ..အရမ်းတော်တာဘဲ..ဟင်းတွေအားလုံးကြိုက်တယ်..လိုက်ချက်ကြည့်မယ်နော်..websitelay ko အထူးကျေးဇူးပါ
30/04/2014 @ 10:10 am
Hi Ma Ei
First of all I would like to say thank you for your sharing from your blog. I found so many kinds of dishes that I really want to cook and don’t know how to cook and some of them cannot find easily in my cooking books 🙂 In cooking books, they are just writing with words. Your website is different cos it’s there have photo so I can easily get them. I saw your photos and you are familiar the person I knew. I was Latha2student 1988-2000.
I think you will be older than 1 year if you are the person that I knew. Anyway I an so glad of this website. Wish you the best forever.
Austin Hein Htet San
25/05/2014 @ 1:45 pm
I amaStudent from Myanmar who’s studying abroad and i find this site very helpful and I can’t thank you enough
08/06/2014 @ 8:33 am
အိသက်​ပုံ​တွေထဲမှာဒီပုံအလှဆုံးဘဲ ပန်းနု​ရောင်​​လေးနဲ့ က​လေး ​တွေ ကလည်းချစ်​စရာ​ကောင်းလိုက်ဒါ အိသက်​​မေ​မေက ညီမထက်​​တောင်​ပို​နေသလိုဘဲ(^_^)
kyi kyi Thein
13/06/2014 @ 3:55 pm
သ်ိပ်ကျေးဇူးတင်တယ် ဟင်းချက်နည်းမျိုးစုံလေ့လာ ရတယ်
မသက်က ပညာကိုဖြန့်ဝေတာ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓါ တ်နော်လေးစားပါတယ်
05/07/2014 @ 8:12 am
Thanks n like it much. I try your way.
05/07/2014 @ 5:44 pm
Please sis want to read your recipe help me
05/07/2014 @ 5:57 pm
How to get your recipe help
11/08/2014 @ 9:58 pm
Really informative article post.Thanks Again. Awesome. bedbdkggkdde
16/08/2014 @ 1:05 am
I like your site too much. I ‘m friend of Ma Myint Myint Swe.
16/08/2014 @ 11:13 pm
pls , kindly remind me who is Myint Myint Swe? 🙂
22/09/2014 @ 8:19 pm
When some one searches for his essential thing, so he/she desires to bbe available that in detail, therefore that thing is maintained over here.
23/09/2014 @ 1:38 am
21/10/2014 @ 2:12 pm
အစ်မ website ထဲကို အမြဲဝင်အားပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းမချက်တက်ပေမဲ့ ဟင်းတွေကြည့်ပြီး သွားရည်ကျပြီး ပြန်သွားပါသည် 😀
04/01/2015 @ 7:08 pm
Do you sell any goods in London?
15/01/2015 @ 2:57 pm
You are the best help for us who live abroad! I did watthar dothtoe and it was really good.. Thanksalot!
TUN AUNG ( Myanmarsar )
16/01/2015 @ 11:09 am
ဒီ Site လေးကုို တင် ပေးထားတဲ့ စေတနာ လေးရယ် ……….
လုပ်ကုိုင်ပုံ အဆင့်ဆင့် ကုို စံနစ်တကျ ဓါတ်ပုံရုိုက် ရှင်းပြထားတာလေး တွေ အားလုံးကုို အရမ်းသဘောကျပါတယ် . . . .
Web Site ရေးထားသူကုိုပါ လေးစားပါတယ် . . . . အရမ်း သပ်ရပ်ပါတယ်
ထွန်းအောင် ( မြန်မာစာ )
04/03/2015 @ 7:25 pm
Thanksalots par shin
19/03/2015 @ 3:12 am
မအိ…. ကျေးဇူးပါနော်…. ညီမလေးက အိမ်ထောင်ကျတာ သိပ်မကြာသေးတော့ ဟင်းတွေ မချက်တတ်ဘူး…. မအိ လမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်း ချက်ကြည့်တာ ချစ်ချစ်က သဘောကျနေလေရဲ့…ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ မမရေ……….
08/07/2015 @ 9:10 pm
Burmese Restaurant in USA.Right now popular our Bumble food in USA. I am doing International food service in USA